Hitan'i Jeb Bush fa ny antso dia azon'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Araka ny hitanao amin'ny lahatsarin'ny Jeb bush Asehonay aminao aorian'ny famakiana azy dia nanana olana kely tamin'ny famantaranandro Apple izy hatramin'ny nahazoany azy teo amin'ny tanany, azo antoka fa na dia be loatra aza ny heriny ary be loatra ny fifandraisany dia tsy teknolojia ny heriny. Jeb Bush rahalahin'ilay teo aloha Filohan'i Etazonia George Bush, kandidà Repoblikana iray ho filoham-pirenena amerikana, dia nilaza tamin'ny lasa fa tsy nampiasa ny Apple Watch, na zavatra hafa avy amin'ny Apple. Liana amin'ny iray amin'ireo orinasa amerikana lehibe indrindra. ' Ity ny horonantsary manana olana amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety miaraka amin'ny Apple Watch, ary nihomehy izy ireo manoloana ny toe-javatra hita.
Saingy tiany izao, araka ny filazan'izy ireo tany amin'ny firenena amerikana avaratra fa 'Cool' izany, saingy manao ny tsikera ataony sy ny heviny ihany koa izy, ary aharihariny fa mety ho tsara kokoa ny fifandraisana amin'ny mpampiasa sy ny fiainana bateria. Toa nitazona ny Apple Watch azy hatramin'ny farany izy.
Tamin'ny fotoana nanaovana dinika araka ny hitantsika amin'ny horonantsary, ny Mpanolotsaina tonian-dahatsoratra Bush nanao antso an-tariby izy, izay notohizany tamin'ny famantaranandro Apple. Rentsika eo am-piandohan'ny resaka ilay olona, ​​ary somary very hevitra ihany i Bush rehefa manandrana mamantatra hoe avy aiza ilay feo hahaha. Nanontany azy ny iray amin'ireo mpanao fanadihadiana raha avy amin'ny Apple Watch izy, ary i Bush kosa no mamaly izany amin'ny famantaranandronao dia tsy afaka miteny ianao.
Fantatra haingana fa avy amin'ny Apple Watch izy io. Vokatr'izany, ny famataranandro dia voatana eo akaikin'ny sofinao vetivety fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Hitan'i Jeb Bush fa ny antso dia azon'ny Apple Watch valiana
Office 2016 ho an'ny Mac dia nahazo fanavaozana lehibe